Ava musings yangu yakanakisisa midziyo yomunzvimbo zvandakaita kunakidzwa, panguva yangu gara muAustria. Ndaiva ipapo chirimo 2016 nokuti mwedzi 4-angu internship panguva diki kadikidiki omunharaunda NGO. The internship Zvakaitika yakanga zvikuru, kuti ndinofanira kusangana matarenda vaduku vanhu, wandinoda agare achitaura kusvikira ikozvino, uye ndave kukwanisa kushandisa unyanzvi akadzidziswa internship rwangu kuitika muchinangwa Singapore.
Mabviro ndiro izvi zvikuru debatable - vamwe vanoti kuti izvi rakarumbidza kubva Swabian nharaunda, uye vamwe vanotaura kuti mukuru zvinyorwa Kasespatzle yomusi shure kune cookbook Navi ruoko-akanyorwa mukutanga kwezana remakore rechi17. The zita angadai zvinobva sangano kukanya doughs kupinda nokuruma kadikidiki chidimbu, asi hapana nhoroondo uchapupu nayo. Munguva dzazvino, dhishi ichi anozivikanwa chikamu nyaradzo chikafu shure refu kwidza ari Crisp Alpine mhepo. zvimwe, unogona kuwana mune omunharaunda mumaresitorendi dzakawanda. Akashanda munzvimbo dzakawanda munyika chiGerman, ari Vorarlberg Kasespatzle (Vorarlberg ari West Austria) zviri zvikuru nevakawanda muAustria. The Pasta yakaitwa kubva hwakatsetseka, sezvo vanotaurwa zita mavambo, apedza kupinda ikaruma duku anyudzwe grilled chizi. The unaku zvechokwadi kudenga, kubvunda mumuromo. Fried hanyanisi yomunakamwe hanyanisi kuwedzera zvinonhuhwirira kuti ichi creamy denga dhishi (chaizvoizvo kuita basa guru!).
Tora ini shure kuAustria - I nguva dzose zvokudanidzira pose Ndinowana izvi Candy Empire nehoro (kutungamirira importers Singapore nokuda confectioneries dzakawanda, iyi ndiyo chete nzvimbo ndinogona kutenga Zvokukurukurirana zvigadzirwa). Nenzira iri zvetsika yeAustria mubhizimisi remhuri pakagadzwa kuti rakaumbwa mukupera kwezana remakore rechi19. Vakabata oma yepamusoro kudzora, vachinyatsoongorora akasarudza zvinhu uye iconic pinkish package, muchiso uyu famed kuti kuva siginicha chirangaridzo muAustria. Mannerschnitten (mumwe packet kuti Hazelnut chokoreti zvitete) ndiye anofanira-edza; kwete saka inonaka kana zvakadaro shata, ichi haana sokuti akundikane kufadza yangu inotapira zino. The Hazelnut nguva dzose transports akandidzosera mazuva angu penya muVienna. Right zvino ndinoedza Zvokukurukurirana chokoreti zvitete kwechinguva tudyo kana pose Ndiri kwazvo nokuti. Ndakafunga kuti Zvokukurukurirana inowanika zvitoro muCentral Europe chete. zvisinei, Ndiri pachena chakaipa sezvo Mannar zvihwitsi dziripo muna Singapore zvakare.
Schlutzkrapfen (hafu mwedzi Pasta akazadzwa the ricotta chizi uye sipinachi)
Andaisangana nawo dhishi ichi apo ndakanga kuongorora muna Innsbruck muWestern Austria iyo inozivikanwa nhangaruvazhe, ari Golden Roof. Ini hopped kuva Datenroku uye akanga achitsvaka chimwe chinhu miriwo. Kuverenga kukwira Muterere, ari Pasta pamwe miriwo mumakomba vakaridza zvakanaka kwandiri, saka I akarayira. Ini kufunga pamusoro refu Pasta with wakatemerwa nemiriwo, asi zvikazooneka kuti zvakanzi flattened Pasta pamwe chinhu mukati maro uye nekurongedzwa ane ndokusasa rimwe chizi uye wakatemerwa chitubu nehanyanisi. The zvakanyunguduka ruomba aishanda ari tani kuti dhishi ichi tsvedza mumuromo mangu. More zvakakosha, Ndichiri kuyeuka hweta kuuya patafura yangu uye vachibvunza kana chakanaka. Ndakamuudza zvakanga yainaka - ndakanga saka mwoyo wake hanya pamusoro vatengi 'kugutsikana uye mwoyo wangu yakazadzwa noushamwari. Kwakatanga kubva South Tirol (zvino chikamu Italy), zviri prevalently zvokudya nevakawanda omunyika Tirol uyewo. A huru yakawanda basa rinobatanidzwa kuti ichi pasinei kuti anotarisa nyore saka kuti.
Mumwe "vanofanira anodya" muVienna, Ositiriya. Zviri munharaunda zvechokwadi dzakagadzirirwa akasikwa ari pakuguma Habsburg kumwedzi. Maiziva kuti paiva penga asi zvakakosha kurwisana shure keke ichi? Vaviri Viennese chikanywa hofori, Demel uye Sacher akanga ari "hwema" hondo hurumende kwenguva refu kuti kunyange zvakatungamirira pusa dare nyaya; ndiani kuzviti ive "Sachertorte yepakutanga"? apirikoti zvikuru sei rinofanira kushandiswa tizadzise keke? Chii chakakodzera tembiricha kuti mvura chokoreti? zvakakomba, vakaita nharo izvi zvose mudare mamiriro, kwete yokubikira mukirasi kana kuti chorudzi. Pakupedzisira, Sacher akakunda hondo uye ikozvino prides pachavo nokuva "chairoiro Sacher kakku." Kunze nhoroondo, pachedu randaifarira mumwe Demel sezvo zviri zvimwe rinotapira uye fluffy kudarika Sacher. Musiyano uri pakati Sacher "Sacher kakku" uye Demel ishamwari? Rondedzero akamuka zvishoma yepamusoro Pricing uye zvakawanda keke akaturikidzana ikawanda apirikoti mukati keke. The yokupedzisira ndiyo zvishoma isingadhuri uye creamier zvikuru.
A mumiririri Vienna kuti cosmopolitanism. In Vienna, pane netsapo misika vachitengesa "zvekumwe" 'zvinhu ichibva zvinenge rose. Unogona kuwana cuisines uye pakugadzira kubva Russia, Teki, Japani, India uye zvakawanda. Pakutanga kubva Middle East, uyu ndiye mumwe Viennese munwe zvokudya nzira dziri dzakawanda mumisika. Made kubva mashed pizi, ari Falafel balls inogona kudyiwa muchimiro Falafel Achiputira kana kuenderana ne flattening chingwa. Chero nzira, Falafel anouya neboka vakatongoparadzwa muriwo uye yogurts mukati O rose wrap kana Pita chingwa. Kuva munhu akakwana kueche sadza, ichi ndicho dhishi shamwari dzangu vakashandisa neni kupa sezvo vaiziva Ini chete dzinotambura sarudzo chikafu sezvo miriwo. Pane tani kuna Falafel nematanga zvose pamusoro Vienna, asi yangu kufarira Falafel mumire ndiye ari Brunnenmarkt. Dzinozivikanwa serisina pamusika anopenga apo munhu wose anogona kuwana vakwanise siyana zvinhu panguva kusimba yakaderera mitengo, pamusika uyu inopa chikamu Falafel wrap kuti uyewo kunodyira isingasviki USD 1 kana zvakadaro, zvichiita kunge yakachipa pashiri muguta. Hatigoni kutaura, manakiro wrap hwakaenzana mumwe kunomumwe mumisika Viennese.
Dzandinofarira yeAustria dhizeti! Buttery chikanywa uye vaviri apuro zvidimbu uye neboka akawomeswa anoita zvemashiripiti uye kuti ndinzwe sokuti kudenga. The ngano ane kuti Austria kutorwa zvinozipa Baklava dhizeti kubva Middle East. Baklava chakagadzirwa fluffy chikanywa uye shuga uye manyuchi, zvichireva zviri kunyura chikanywa ari manyuchi. Ari kupfuura fruity divi, Apfelstrudel ndiko vemunyika shanduro Baklava- uyu muenzaniso wakanaka yeAustria madhishi, sezvo vazhinji vavo vanogona chamber zvikasawanirwa vokutanga yeAustria umambo nharaunda ravakanga yabva. Pane zvisingaverengeki Apfelstrudel Recipes paIndaneti, uye vamwe yokubika vanyori vane rupo zvakakwana kugoverana zvavo mhuri resipi nenyika. zvisinei, waifarirwa kuzvitonga kuti mukanyiwa kunofanira zvitete zvokuti chikanywa Chef anogona kuverenga pepanhau kuburikidza nawo.